एनआरएन यूकेको ज्ञापनपत्रको प्रभाव : विमानस्थलमा,हेल्प डेस्कले पायो पुर्णता - VOICE OF NEPAL
१४ चैत्र २०७५, बिहीबार १५:१५ 144 ??? ???????
गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएन ) यूकेको विशेष पहलमा नेपालको एकमात्र त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो पटक एनआरएन डेस्क स्थापना गरिएको छ।
बिहिवार विमानस्थल मै आयोजित एक समारोहमा औपचारिक रुपमा उक्त डेस्कको उद्घाटन गरिएको हो। सो कार्यक्रममा एनआरएनका केन्द्रिय अध्यक्ष भवन भट्ट, उपाध्यक्षद्वय कुमार पन्त तथा कुल आचार्यको पनि उपस्थिति थियो। गत जनवरी महिनामा बेलायतको अध्यागमन प्रणालीको अध्ययन भ्रमणमा आएका अध्यागमन विभागका प्रमुख इश्वरराज पौडेल लगायतका अधिकृतहरुसंग एनआरएनले गरेको अन्तर्कृयामा यो विषय उठेको थियो।